Derby County oo shuruud ku xirtay heshiiska uu Frank Lampard ugu wareegayo Chelsea – Gool FM
(England) 15 June 2019. Derby County ayaa shuruud ku xirtay heshiiska uu Frank Lampard ugu biirayo kooxda Chelsea suuqa xagaaga ee haatan socda, sida ay maanta ku warameyso saxaafada.
Frank Lampard xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay uu macalin u noqday kooxda Derby County ayaa wuxuu ka caawiyay inay qeyb ka noqdaan kulamada isreeb-reebka oo ay ugu soo gudbayaan horyaalka Premier League.
Derby County oo haatan ka dheesha heerka 2-aad ee horyaalka ingiriiska ayaa ka dalbatay maamulka Kooxda Chelsea lacag magdhow ah, si ay ugu ogolaadaan in la kansalo heshiiska Frank Lampard isla markaana uu u dhaqaaqo dhanka Blues.
BBC-da ayaa sheegtay in Chelsea ay ku qasban tahay inay siiso Derby County aduun dhan 4 milyan oo ginni hadii ay doonayaan in Frank Lampard uu noqdo badalka macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri.
Macalinka haatan leyliya Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa qarka u saaran inuu ka dhaqaaqo si uu ugu wareego kooxda Juventus isla markaana uu u noqdo badalka Massimiliano Allegri, xili Frank Lampard uu yahay musharaxa ugu cadcad ee la wareegi kara shaqada tababarka ee naadiga Blues.